'पुस्तकमा लागेको कर हट्दैन !'‍- अर्थमन्त्री | काव्यालय
‘पुस्तकमा लागेको कर हट्दैन !’‍- अर्थमन्त्री
by काव्यालय February 28, 2020
सरकारले विदेशी पुस्तक आयात गर्दा अंकित मुल्यको १० प्रतिशत कर लिन थालेको छ । यसको विरोधमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । यसैबीच अर्को संसदले छलफल गरेर नटुंग्याएसम्म पुस्तक आयातमा लागेको कर तत्काल नहट्ने,अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न मुलकले पुस्तक बिक्रीमा ५ देखि १८ प्रतिशत कर लगाउने गरेको बताए । नेपालमा अर्बौं लगानी गरेर छापाखाना खुलेकाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए ।
पुस्तक बिक्री गर्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत नाफा हुने भन्दै उनले ब्यापारमा कर लगाउने प्रष्ट पारे । यसबारे आफू बहस गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए ।
करै नलाग्ने भएपछि पुस्तकमा जथाभावी मूल्य राखेर पनि बिक्रीवितरण भएको खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘पुस्तकको व्यापार व्यापार नै हो, ज्ञानको व्यापार हुँदैन ज्ञानको त आदानप्रदान हुन्छ। ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित पार्ने काम नगरौँ।’
एउटा पुस्तकमा ३०–४० प्रतिशत नाफा खाने तर सरकारलाई १० प्रतिशत कर दिन नमान्ने प्रवृत्ति गलत भएको पनि खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘नाफामा कर लगाइएको हो, ज्ञानमा कर लगाइएको होइन। व्यापार गरेर नाफा धेरै कमाएपछि कर उठाइन्छ। कर लगाएपछि पुस्तक नै बिकेनन् भनेर हल्ला गरिएको छ। कर छलेर ल्याएको पुस्तक समात्दा ज्ञान पक्रिइयो भन्ने गरिएको छ।’